Abathandi beesekese ngabasetyhini abakhethekileyo. Bazinikezele kakhulu kumnandi okonkcenkceshelo abangenakucinga ubomi babo ngaphandle kwabo, nangona baqonda ukuba ukwanda kweswekile emzimbeni kubonakalisa impilo. Yaye xa ungaphenduli nje kuphela imeko yakho, kodwa ukuzaliswa ngokupheleleyo kwengane, kukho into ekucingayo. Umonakalo wokusetyenziswa kakubi kweswekile ngexesha lokukhulelwa kwaye kungekhona nje isihloko sesincoko namhlanje.
Vumela umnqweno kunye nesifiso esingenakunqwenelekayo sokutya ieskese ngexesha lokukhulelwa lihlelwe njengento ekhethiweyo kunye neyakhekayo, kuyingozi kakhulu ukuhamba malunga nale nxalenye ethile.
Zombini zibiza kakhulu
Nangona umama enandipha ukuncwina, i-surplus yayo kunye nezithako ezisebenzayo ngokukhawuleza zifakwe kwi-placenta kwaye zichaphazele imeko yengane. Kuphawula ukuba ukusetyenziswa ngokugqithisileyo kweswekile, nokuba yimveliso yezoshishino, i-jam eyenziwayo, i-pastries edibeneyo, iziphuzo ezivuthayo okanye i-raffine eqhelekileyo yonakalisa imeko yowesifazane emva kweyure emva kokumkelwa.
Ngokuqinisekileyo, awukwazi ukwenza ngaphandle kokunyanga okumnandi kunye ne-carbohydrates ewusizo. Zizo zinto ezibonelela amandla kunye nokuphakanyiswa kwemvakalelo yezinto zomzimba. Kuthekani ukuba uthando lweesekese luba ngumlutha, kwaye ingqiqo yenani sele ilahlekile? Kudinga ukulila i-alamu!
Yazi, i-sugar excess iyakuthinta ubuhle bakho nangemva kokuzalwa komntwana.
• Ushukela ngokungenakuphilisa ukuthoba i-tooth e-tooth nokukhawulezisa iinkqubo zokutshatyalaliswa, okwenzeka ngexesha lokukhulelwa nokubuyiselwa emva kokubeleka sele kusekho unxibelelwano olukhuselekileyo.
• I-carbohydrate engaphezulu ibonakaliswa kwindleko yesisindo esheshayo kunye nokubuyiselwa kwengxaki
imeko ekhululekile. Ngethuba lokulinda umntwana, ubunzima obunzima bungabangela ukuba kube nemiphumo emibi, kufikelelwe kogqirha.
• Ukutshatyalaliswa ngumhlobo oqhelekileyo wezinyo ezithandekayo. Iswekile eshukumisa umsebenzi wefungus of the genus Candida, elowo umntu analo. Ukunyangwa kwe-urrogenital candidiasis kwabasetyhini abakhulelweyo kuyinkqubo enononophelo, ende kwaye inyanzelekile. Ukuba i-thrush ayiphathwa kakubi ekupheleni, ngoko ngexesha lokubeleka esi sifo siya kubonakaliswa kwizitho zangaphandle nezangaphakathi zomntwana. Ukongezelela, la mabhinqa abeletha kwiwadi echaphazelekayo yezibhedlele zokubeleka.
• Ukusetyenziswa okubanzi kwemveliso yokutya ecocekileyo kubangela ukuba i-pancreas isebenze ngamandla anamandla. Ukusuka apha kukho iingxaki ngamathumbu, iintlungu kwisisu, ukuphakanyiswa okanye ukwanda kwegesi.
• I-insulin iphinda ifuthe kwishukela kwaye ibangela iingxaki kwi-diabetes, i-neoplasms kunye neengxaki zegazi.
• I-carbohydrate engaphezulu ifakwa kwii-adipose tissue, ukwandisa ubunzima bomntwana, onokuba yinkinga ekuzalweni nasekuphumeni.
• Ukuphendulwa kweengxaki eziye zadlulayo kwiminyaka yamuva kubantwana bonyaka wokuqala wobomi zibangelwa yi-carbohydrate engaphezulu ngexesha lokukhulelwa komama wengane.
Oogqirha bezingane nabo baqhuba iingxabano zabo malunga noshukela. Bonke kunye neengqondo zengqondo, bafika kwizigqibo ezidangalisayo: umthwalo obalulekileyo emzimbeni kunye nokukhathazeka okwesabisayo, umsebenzi, ukuhlolwa okungonelanga kwamandla abo ngoomama ngenxa ye "hormone yovuyo" kakhulu ithintela inkqubo yesifo somntwana. Ngenxa yoko kuya kubangela ukuxilongwa komntwana ococekileyo.
Ekufuneni isisombululo esifanelekileyo phakathi kweemfuno zomzimba kunye nempilo yakhe, abaninzi abathandekayo abathandekayo baya kubafakeli bakhe. Olu khetho lunokwenzeka, kodwa kungekhona kwimeko yokukhulelwa. Okokuqala, ezinjalo zokuvumba zifuna umthamo othile, kwaye ziyakumlutha. Okwesibini, baneenamba ezininzi ezikhokelela ekudleni, isifo sohudo, intlungu yesisu kunye nokunyuka kwamafutha.
Indlela ethembekileyo neyithengiweyo, ekugqibeleni ekutshintsheni imikhuba nokuphakamisa intsapho yonke kwizinga elitsha lokutya, linikwe ngabaxhasi bezondlo. Kubalulekile ukukhumbuza ukulimala kokusetyenziswa ngokweqile kweswekile kunye nokubeka esweni inani lemveliso emnandi, kodwa nokukwazi ukuba yenziwe ntoni. Kakade ke, iigwangu ezizenzela kunye nokupheka zingaphumelelanga. Ngaphezu koko, kwikhefu lokubeletha ukunyamekela umntwana, abaninzi abanomama banakho ukuhlaziya okanye ukuphucula iitalente zabo.
• Khetha okanye wenze iindlela zokupheka ezisekelwe kwizinyosi kunye neziqhamo ezomileyo ezomileyo;
• Yenza usebenziso oluphezulu lweeshukela zendalo ekulungiseleleni izitya ezimnandi - i-fructose kunye ne-lactulose, ezizityebi kwiziqhamo.
• Ukwenza ngokusesikweni "ukukhohlisa" okunomsoco ekudleni kwintsapho yonke kunye nabantwana abancinci: i-marmalade (isusa izinto ezinobungozi kunye nezinto ezinobunzima obunzima ukusuka emzimbeni, kodwa zenza negalelo ekuhlanjweni komzimba), izithelo ezomileyo (ezityebi kwiifiber kunye namavithamini ezincedo kwintliziyo kunye ne-GIT), i-marshmallows (kungekhona njengothubile njengetshokoledi, kwaye icebile kwiprotheni kunye ne-phosphorus). Akunabo bonke ababalinganisekanga ngokulinganayo, kodwa xa kuthelekiswa neminye imikhiqizo - ikhethwayo.
Ngexesha lokukhulelwa, kungcono ukusebenzisa ii-carbohydrates eziyinkimbinkimbi, ezizalisa umzimba ngamandla ngamandla kwaye zichithe ixesha elide. Okuthakazelisayo kukuba, imimiselo ye-carbohydrates kwi-trimester yokuqala ayinakugqithisa ama-450 amagremu ngosuku, kwaye kwi-sibini-350. Ukwenza oku, kwanele ukondla i-corn, ibhanana kunye ne-citrus. Kwakhona okufunekayo kwi dessert yimizi - i-apula, i-tomato, iinaninku ne-plum, iinqutyana ezininzi ze-chocolatelethi emnyama, ezityebile kwi-provitamin A, isinyithi kunye ne-magnesium okanye iintlobo ezahlukeneyo.
Kodwa akukho nto inceda ukugcina umzimba kunye nengqondo ngetoni, njengokuzithiba nokuzithiba. Banceda ukuchaza nokulandela umlinganiselo wenani. Emva koko isiqwenga seshokolethi, kunye nekhekhe ye-glaze, kunye ne-puff pastry kuya kuzuza!
Ukuboniswa kwangaphambili-kuthetha ukuxhoba. Musa ukubeka ingozi kwimpilo yentsapho yakho. Umbuzo wokusetyenziswa kakubi kweswekile ogqithiseleyo awunakuze utyeshelwe.
• Utywala kunye ne-alcoorice pandi ezifunyenwe eNtshona zithintela ukuhamba kwemimoni ye-hormones yemvelo ngokusebenzisa i-placenta kumntwana. Oku kuchaphazela ukubunjwa kweengingqi zengqondo.
• Ukwanda kweeshukela kubangela ukungabikho kwintsebenziswano kunye nabasetyhini kunye nosongelo.
• Ungathathi indawo yethando yeekesekese - enye, umzekelo, isaliti okanye i-citrus. Ngokukhawuleza okanye kamva isenzo sokuqala siza kubuya, kodwa sele sisebukhulu obuphindwe kabini.
• Ukuba umnqweno weesekese unamandla kakhulu, ngoko kufuneka uhambe ugqirha uze uthathe iimvavanyo. Mhlawumbi esi sizathu sokungabikho kwamavithamini, ngoko umzimba uyazama ukuwazalisa kwaye unike izibonakaliso.
• Izizathu zokonwaba kunye nesimo sengqondo esifanelekileyo ngexesha lokukhulelwa sinceda ekuveliseni ihomoni yolonwabo ngakumbi kunokothokolethi. Khumbula oku!
Indlela yokutya nokulahleka isisindo kakuhle
I-sauce ebhaka ebhaka
Imbali yoNyaka omtsha
Ukunyusela umzimba kunye nokunethezeka
Uphuhliso lwabantwana: uhlazo lwentloni, iqhinga
Isobho se Sorrel